Klopp oo ka warbixiyay xaalada xiddigaha ka dhaawacan Liverpool, kahor finalka Champions League – Gool FM
(England) 28 Maajo 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id, kahor inta aysan u safrin magaalada Madrid, finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Tottenham garoonka Wanda Metropolitano sabtida soo aadan.
Jürgen Klopp ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka maqnaanayo ciyaaryahanka khadka dhexe reer Guinea ee Naby Keïta ciyaarta finalka Champions League ee la ciyaari doono sabtida soo aadan.
Naby Keïta ayuu dhaawac muruqa ah kasoo gaaray inta lagu gudi jiray kulankii ay ku wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Liverpool garoonka Cump Nou, taasoo ka dhigtay inuu soo idlaaday xili ciyaareedkiisa kooxda Reds.
Dhinaca kale ciyaaryahanka khadka dhexe reer Guinea ee Naby Keïta ayaa lagu soo waramayaa inuu halis ugu jiro in xitaa uu ka maqnaado koobka qaramada Afrika.
Sidoo kale Jürgen Klopp ayaa wuxuu ka hadlay xaalada xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino, wuxuuna xaqiijiyay inuu qabanayo shaqo fiican islamarkaana la filayo inuu dib ugu laabto tababarka kooxda maalinta barri ah.
“Naby Keïta ma heysto wax fursad ah, wali wuxuu ku gudi jiraa xaalad soo kabasho ah, balse waan ka xumahay ma heli doono fursad uu kaga qeyb gali karo kulanka finalka Champions League”.
“Roberto Firmino mar hore ayuu soo laabtay, laakiin ma uusan ka qeyb galin tababarka guud ay kooxda sameysay maanta, waan arki doonnaa”.